Archive du 20180222
Datim-pifidianana Valy boraingina hatrany ny an’ny mpitondra
Ny minisitry ny asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy Maharante Jean de Dieu no nilaza halina fa antsoina hivory tsy ara-potoana manomboka ny alatsinainy 26 febroary ho avy izao ny solombavambahoaka sy ny loholona mba handinika ireo lalàna fehizoro 3 momba ny fifidianana.
Fahotan-dRajoelina Tsy vitana fifomponana kely, hoy i Jean Louis Rakotoamboa
Variana ny tenako fa toy ireny olona tena nahay nitantana sy tsy nihoson-dra tanana ireny ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, hoy ny filohan’ny antoko Teza,
Fanamboarana pasipaoro Feno endrika kolikoly, zary lasa fahazarana
Mampanahy ny zava-misy ankehitriny fa dia gaboraraka ny fidirana sy fivoahana eto Madagasikara.
Fiaraha-miasan’i Madagasikara sy ny Firenena Mikambana Mbola ezaka ny fampandrosoana maharitra
Omaly no notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny fanehoana ampahibemaso ny ezaka vita tamin’ny fiaraha-miasan’ny firenena mikambana sy Madagasikara ary ireo mpiara-miombon’antoka nandritra ny taona 2017.
Mpivarotra etsy amin’ny Fasan’ny karana Hanaraka ireo mpitatitra eny Andohatapenaka
Nifindra omaly teny amin’ny toby fiantsonana vaovao eny Andohatapenaka, ireo mpitatitra mihazo ny lalam-pirenena voalohany raha hanaraka miandalana kosa ireo mihazo ny lalam-pirenena fahefatra sy fahenina.
Claudine Razaimamonjy Tapitra amin’ny 7 aprily ny fitazonana am-ponja vonjimaika azy
Miparitaka any anaty tambajotra ara-tsosialy “facebook” amin’izao fotoana ny sary maneho an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy any Frantsa miaraka amina olona vitsivitsy.
Jean Marc Koumba Lasa mpiambina manokana an’i Naina Andriantsitohaina
Ofisialy izao fa lasa mpiambina manokan’ny mpandraharaha mpanefoefo Naina Andriantsitohaina i Jean Marc Koumba (JMK), ilay teratany Gaboney metisy Alemana, efa tompondaka erantany amin’ny taranja kick boxing ary mpiambina manokana an’i Marc Ravalomanana ny taona 2001 ka hatramin’ny 2005.
Teny Malagasy Betsaka ireo ankizy mpianatra no tsy mahafehy azy intsony
Tsy mahay sy tsy mahafehy ny teny Malagasy intsony ny ankamaroan’ireo mpianatra ankehitriny, noho ny firoborobon’ny teknôlôjia, araka ny fanadihadiana natao teny anivon’ny sekoly maromaro eto an-drenivohitra.
Fifidianana FMF Mahalala zavatra i Stan Rakotomalala
Tsy takona afenina ny olana eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra Malagasy momba ny resaka fifidianana, izay nahitana savorovoro maro teny anivon’ny seksiona.Nisy avy eo ilay taratasy avy any amin’ny FIFA nandroso hevitra ny hampiatoana ny zotram-pifidianana rehetra aloha ka hanatanterahana fanadihadiana, mba hamantarana ny tena fototry ny olana sy hikaroham-bahaolana.
Baolina kitra "Coupe d'Afrique" Tafita amin'ny dingana manaraka ny Fosa Juniors
Tafita amin'ny dingana manaraka amin'ny fiadiana ny amboaran'i Afrika eo amin'ny lalao baolina kitra ny ekipa solontena Malagasy Fosa Juniors Boeny rehefa nirava ady sahala 0-0 tamin'ny Léopard Kenianina tao amin'ny kianja Rabemananjara Mahajanga omaly alarobia 21 febroary 2018 teo amin'ny lalao miverin'ny fifaninanana savaranonando amin'ity fifaninanana ity.
Champions League Afrikanina Raraka ny CNaPS Sport
Tapitra hatreo ny nofinofin’ny CNaPS Sport ho lasa lavitra amin’ny fifaninanana ny « Champions league » aty Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra.
Mpanazatra baolina kitra Malagasy Mifamadibadi-toerana ohatra ny mpanao politika
Manomboka indray ity ny taom-pilalaovana 2018 manerana ny ligim-paritry ny baolina kitra eto Madagasikara. Fantatra fa be ireo mpilalao nifindra lasy amin’ny ekipa hafa noho ny nilalaovany teo aloha.
Ahmad –filohan’ny CAF Voaasa tao amin’ny lapan’i Elysée
Anisan’ireo vahiny manan-kaja voaasa manokana tamin’ny fiaraha-misakafo nokarakarain’ny filoha Frantsay Emmanuel Macron tao amin’ny lapan’i Elysée omaly antoandro ny filohan’ny konfederasion’ny baolina kitra Afrikanina (CAF) Ahmad.
Andro aman’alina ny fiainan-dRamalagasy ankehitriny dia tsy mahalala na inona na inona intsony afa-tsy ny fitadiavana izay mba remby kely ahafahany mitazona ny ain’ireo nateraky ny kibony.
Lalana miakatra an’Ambohipo Amboarin’ny depiote Rastany
Miverina manamboatra ny lalana mirefy 300 m avy ety Andohan'i Mandroseza miakatra ny tanànan'Ambohipo iny indray izay tena nampimenomenona ny mponina teny an-toerana ny Depiote TIM voafidy tao amin'ny boriborintany faha-2,
Fahasalamam-bahoaka Mandravarava indray ny pesta
Raharaha mahakasika ny fahasalamam-bahoaka ary tena nitarika voka-dratsy maro toy ny fahafatesana, tsy fianaran'ny mpianatra, tsy fihodinan'ny toekarena, fizahantany ...
Ady amin’ny pesta Nanolotra fitaovana mitentina 600 tapitrisa Ar ny PSI/USAID
Nanaiky ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Andriamanarivo Mamy Lalatiana fa tsy mbola foana ny aretina pesta eto amintsika. Mbola mitohy hatrany ny ady, hoy izy,
Vondrona mpampihorohoro “Etat Islamique” Mikasa hanorom-ponenana ao Mahajanga ?
Niteraka resabe teto amin’ny firenena ny fisian’ny teratany vahiny hafahafa hita nifamezivezy teto ny faramparan’ny taona 2017, nialohavan’ilay vaovao nampisavorovoro tamina gazety iray fa hampiditra mpitsoa-ponenana ny mpitondra.
TRANO NIRODANA TENY MAHAMASINA
Trano biriky iray no nianjera tetsy Mahamasina akaikin'ny Saint Joseph omaly tamin'ny 11 ora.
Fampiasana fitaovam-piadiana any Etazonia Mitombo ny fepetra sy fanaraha-maso
Taorian’ilay tranga fitifirana mpianatra tamina lisea iray tao Florida nataona mpianatra taloha tao amina lisea iray, mba ho fandraisana andraikitry ny filoha Amerikanina Donald Trump,